Ireo orinasan-doka dia mitady fomba hampifandraisana angona hafa amin'ny FLoC | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 31/05/2021 10:22 | About us
FLoC dia fomba fizahana doka mandeha ho azy tsy misy cookies avy amin'i Google izay "miaro ny fiainanao manokana" amin'ny alàlan'ny fanomezana anarana tsy fantatra anarana ny mpampiasa Internet noho ny cookie fahatelo.
Na izany aza, FLoC mety hanamora izany sy hahamora kokoa an'ireo orinasa mpanao dokam-barotra hamantatra sy hiditra amin'ny fampahalalana momba ny olona an-tserasera, araka ny nandrasan'ny mpiaro ny etika sy ny etika isan-karazany, manomboka manambatra ny taratasim-panoratan'ny FLoC sy ny mombamomba azy efa fantatra ny orinasa.
Ireo orinasa teknika miasa eo amin'ny tsenan'ny fitantanana ny nomerika nomerika dia nilaza fa ireo manondro dia hanampy amin'ny fanatsarana ny fahamarinan'ny rafitra mamantatra ny mombamomba ny olona ary mety ho mpanondro maharitra aza.
"Arakaraka ny isan'ny famantarana ananantsika no hitovizantsika marina kokoa, ary ny famantarana ny FLoC dia iray amin'ireo famantarana hampiasaintsika," hoy i Mathieu Roche, tale jeneralin'ny ID5.
Google dia manondro ny FLoC ho modely kendrena dokambarotra tsy miankina amin'ny fiainana manokana satria tsy manara-maso olona tsirairay ny fomba. Fa kosa, FLoC dia mampiasa ny fianarana milina hananganana vondrona olona mifototra amin'ireo pejin-tranonkala notsidihin'izy ireo.
Ho fanampin'izay, ny ID FloC natokana ho an'ny olona dia havaozina isan-kerinandro, izay natao hanivana azy ireo ho lasa vondrona mivoatra tsikelikely ary toa mametra ny fampiasana FLoC ID ho toy ny mpamaritra maharitra. Koa satria mandeha ho azy ao amin'ny mpizaha tranonkala toa ny Chrome ny rafitra, tsy voafaritr'i Google mazava tsara ny fomba fanangonana ireo vondrona.
Na izany aza, ny indostrian'ny dokam-barotra (izay naka teknolojia fototra amin'ny Internet toy ny cookie sy ny adiresy IP hahafantarana olona amin'ny Internet) jereo ny fotoana ahafahana manao toy izany amin'ny ID FloC manantena ny hisorohana ny fisian'ny cookies tsy ho ela.
Rehefa ela, Ny mpamantatra FLoC dia mety hiasa ho toy ny mpanondro maharitra amin'ny fomba mitovy amin'ny adiresy IP, hoy i Nishant Desai, talen'ny teknolojia sy ny asan'ny vondrona ao amin'ny Xaxis, vondrona adtech an'ny GroupM.
Toy ny adiresy IP, ny ID FloC dia tsy hijanona ho static tanteraka. Na izany aza, ireo ID FLoC mitovy na ny elanelan'ny ID mitovy dia mety misy ifandraisany amin'ny olona iray.
"Raha tsy miova ny fihetsiny, dia hisy vokany eo aminy hatrany ny algorithm, ka misy ny mpampiasa FLoC maharitra miaraka aminy, na mety hanana izany ny algorithm sasany."
Ireo mpisolovava momba ny tsiambaratelo dia nanamafy fa ny mari-pahaizana FLoC dia afaka manamaivana ny fahasahiranan'ireo orinasa manangona vaovao momba ny olona iray.
Na dia hatreto aza ny mpampiasa tranonkala iray dia tokony hitsidika tranokala farafahakeliny indray mandeha alohan'ny ahafahan'ilay tranonkala mametraka cookie eo amin'ny masinin'izy ireo hanarahana ny fihetsik'izy ireo eo amin'ny tranonkala, dia ho fantatra ny ID FLoC sy ireo famantarana avoakany.
Ho fanampin'ny fampifandraisana ireo famantarana FLoC amin'ireo karazana data hafa, Ny fomba fitadiavana cookieless an'i Google dia azo ampiasaina samirery mba hamoronana mombamomba ny mpihaino.
Na izany aza, mazava fa ny orinasa hafa dia mihevitra ny antontan-taratasin'ny FLoC ho toy ny angon-drakitra ilaina amin'ny maha-izy azy, ka izany no mahatonga ireo mpiaro ny fiainana manokana toa an'i Cyphers mihevitra azy ireo ho olana amin'ny tsiambaratelo izay tsy dia teorika loatra.
Chrome dia hanome ID FLoC ho an'ny mpampiasa Chrome tsirairay izay tsy nisoratra anarana, amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny sehatry ny boaty sandbox an'ny tsiambaratelo na fanakanana azy amin'ny extension. Ka na dia mbola tsy nitsidika tranokala aza ny olona iray, ny ID FloC dia afaka manambara vaovao momba an'io olona io izay mety tsy ananan'ny tranonkala na ny doka.
Ohatra, miaraka, ireo angona angon-drakitra ireo dia mety hanambara ny maha-lahy na maha-vavy azy, raha toa izy ireo mety ho ao anaty fefy fidiram-bola ambony na ambanin'ny karama iray, na raha mipetraka amin'ny faritra iray izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Ireo orinasan-doka dia mitady fomba hampifandraisana angona hafa amin'ny FLoC